Sefa yakateedzana FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Nei firita yemvura yekudiridza ichidikanwa?
Sefa yemvura yakakosha kune ese madiridziro masisitimu. ... Kunyangwe zvidimbu zvidiki zvejecha zvikapfuura nepasisitimu yako zvisina kuzvivhara, zvinokonzeresa kupfeka pamidziyo. Otomatiki mavharuvhu ane madiki kwazvo emigwagwa yemvura mukati mawo ayo anogona kuvharirwa zvichikonzera kuti vharuvhu ikundikane kuvhura kana kuvhara
Ndeipi iri nani disc firita kana skrini firita?
Dzimwe nguva hunhu hwekunatsa hunopihwa hwakaenzana pajira riya saizi yakafanana sefa firita. Imwe mukana wekuti iyo disc firita ane pamusoro pezvenhau Sefa ndeyekuti inogona kudzoka nekukurumidza nekukasira nemvura shoma. Dhinda mafirita inoshandiswa mukudiridza kwekurima kwakafukidzwa neiyo ISO 9912-2 standard.
Nzira yekuchenesa sei firita?
Bvisa firita kubva kune chinobatanidza. Chenesa firita yekudiridzira nekupukuta chero maiseti pane sefa. Isa sefa mumudziyo mudiki nemvura yakachena kuti usunungure uye ubvise chero tsvina
Ndeipi mesh firita yekusarudza yemadiridziro masisitimu?
Semutemo wenguva dzose, ini ndinokurudzira 60-70 mesh renji yemisoro yekupfapfaidza ne100-mesh mafirita mushure memavharuvhu ekudiridza ekudiridza. Iyo yekuwedzera mari inoshandiswa pane yakanaka mhando filtration system inozozvibhadharira yega pasi pemugwagwa nekudzikiswa kwekuchengetedza uye mashoma chikamu chinotsiva.